Ungayenza kanjani i-air freshener eqinile ukwenza amakha endlini | Bezzia
UToñy Torres | 09/10/2021 16:00 | Zenzele, Ikhaya
Ukwenza umoya oqinile ovuselele amakha endlini kushesha kakhulu futhi kulula kunalokho okungabonakala. Ukuze unganukisa ikhaya lakho ngephunga lakho olithandayo, ngaphandle kwesidingo sokusebenzisa imikhiqizo yamakhemikhali futhi ayihloniphi kakhulu imvelo. Ukuba nephunga elihle ekhaya kubalulekile ukuze ukwazi ukujabulela umuzwa wenhlalakahle yekhaya elihlanzekile nelibukeka kahle.
Ukufeza lokhu kunamaqhinga amaningi enziwa ekhaya, njengokuthi ube nezimbali ezintsha, izivuseleli zomoya zemvelo ekamelweni ngalinye, izikhwama zendwangu ezinezimbali ezomile zamakhabethe, phakathi kwezinye izinketho eziningi. Njengalo mbono ukudala umoya oqinile oqabulayo ongawusebenzisa womabili ukwenza amakha endlini, njengoba abadilidi noma amakhabethe angaphakathi. Ngoba akukho lutho olungathandeki kunengubo eyigugu kodwa enephunga elibi.
1 I-air freshener eqinile, yenziwa kanjani?
1.1 Nge-wax yemifino
1.2 Ungayenza kanjani i-air freshener eqinile nge-jelly
I-air freshener eqinile, yenziwa kanjani?
I-solid air freshener ayilutho ngaphandle kohlobo lwensipho yakudala, kuphela esikhundleni sokusetshenziselwa ukuwasha izingubo, isetshenziselwa ukunambitha ikhaya noma amakhabethe. Ukwakha lezi zinsipho ezinukayo noma umoya oqinile oqabulayo, uzodinga i-wax yemifino ukudala izinto eziqinile. Yize kukhona enye inketho elula, esheshayo futhi eshibhile, i-gelatin. Nakhu ukuthi ungayenza kanjani i-solid air freshener ngazo zombili lezi zindlela, ngakho-ke ungazama nokwenza okwakho okudali ozoqhumisa ngalo ikhaya lakho.
Ukwakha i-air freshener eqinile uzodinga ukusebenzisa i-soya wax, okungukuthi, ingumkhiqizo ngaphezu kokwenziwa ngezandla, yi-vegan. Ngokuqondene nesithako esisetshenziselwa ukufeza amakha, ungakhetha uwoyela obalulekile lapho kungenza ukuthi inani ozolisebenzisa libe ngu-5% wenani maqondana ne-wax. Uma ufuna ukusebenzisa uwoyela wezitshalo, amaphesenti azoba yi-10% maqondana nenani le-wax yemifino esetshenzisiwe. Lezi yizinto ozodinga ukuzenza dala i-air freshener eqinile eyenziwe ngemifino eyenziwe ngokwenziwa yemifino.
I-100 gr ye i-soya wax
uwoyela obalulekile noma isazi sezitshalo ozikhethele sona
Le nqubo ilula kakhulu futhi ngeke ikuthathe ngaphezu kwemizuzu engama-30. Isihluthulelo ukuncibilikisa i-wax wax, inqubo okumele yenziwe ngokushisa okuphansi. Lapho i-wax incibilika ngokuphelele, sengeza inani elidingekayo lephunga elikhethiwe. Khumbula, uma usebenzisa uwoyela obalulekile kufanele ungeze u-5% futhi uma kunguwoyela wezitshalo inani lizoba ngu-10% uma kuqhathaniswa no-100gr we-wax wax.
Hlanganisa ngesipuni sokhuni uhlanganise kahle izithako. Okulandelayo, uthele inhlanganisela isikhunta abicah. Kubalulekile ukuthi zenziwe ngalolu daba ukuze amaphilisi okuvuselela umoya asuswe kalula kwisikhunta. Uma ufuna ukuhlobisa i-air freshener yakho eqinile, kuzofanele ungeze amaqabunga ambalwa e-potpourri, amaqabunga omisiwe, induku yesinamoni noma ama-citrus peels. Vumela ingxube ipholile futhi iqine ngokuphelele Ngaphambi kokuqhamuka kanye ne-voila, usuvele unezinto eziqinile zokwenza umoya ezigcobisa indlu yakho.
Ungayenza kanjani i-air freshener eqinile nge-jelly
Le enye inketho ilula njengaleyo edlule futhi izinyathelo ziyafana kakhulu. Umehluko ukuthi isithako esisetshenziselwa ukuthola into eqinile yi-gelatin. Inqubo yile elandelayo, okokuqala kufanele sibilise inkomishi yamanzi, ngemvilophu ye-gelatin engathathi hlangothi nezipuni ezine zikasawoti. Lapho ingxube ibila, susa emlilweni bese ufaka inkomishi yamanzi abandayo.
Ngalesi sikhathi sizofaka amakha akhethiwe, sizodinga amathonsi ayishumi noma ayi-10 kawoyela obalulekile. Futhi ukuze i-air freshener eqinile nayo ibe nombala omuhle, sizofaka amaconsi ambalwa wokufaka umbala kokudla. Thela inhlanganisela ezitsheni zengilazi, njengezimbiza ze-yogurt, izimbiza ezincane zamasoni, noma iyiphi imbiza yeglasi onayo ekhaya. Lapho ingxube seyipholile, i-gelatin izoqina futhi uzoba ne-air air freshener ekahle ongayifaka ezindlini zokugezela noma emakhoneni amancane endlu yakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ikhaya » Ungayenza kanjani i-air freshener eqinile ukwenza amakha endlini
Ukuzivocavoca kwemilenze emi-4 okwenziwa ekhaya
Izinzuzo ezinhle zokudla ubhanana